Shina: Ny krizin’ny rano tany Harbin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2018 9:18 GMT
Tapaka ny famatsian-drano nandritra ny efatra andro tao Harbin, tanàndehibe iray any avaratra atsinanan'i Shina, taorian'ny fipoahana nitranga tao amin'ny orinasan'ny akora simika ka nahatonga ny fandotoana ny ranony rehefa niparitaka izany. Nandritra ny vanim-potoanan'ny tsy fahampian-drano, izay nanomboka ny 23 novambra 2005 dia samy tapaka ny rano izay ampiasaina amin'ny fiainana andavan'andro sy ho an'ny famokarana ara-barotra. Lasibatra tamin'izany ny mponina miisa 3,8 tapitrisa tao Harbin .
Nandefa sary vitsivitsy izay mampiseho ny mponina tao an-toerana nihazakazaka nankany amin'ny fivarotan-dehibe mba hividy zava-pisotro sy rano voadio i ESWN ary nampifandray izany tamin'ny sasantsasany tamin'ireo fitantaran'ny fampitam-baovao lehibe momba ny krizin'ny rano .
Nahatsikaritra ny tsahon'ny krizin'ny rano sy ny horohorontany ihany koa i Howard French talohan'ny fanambarana ofisialy. ( Voamarina fa diso ny fanambarana momba ny horohorontany taoriana kely). Nihevitra izy fa misy ny olana eo amin'ny fandrindrana sy ny fahombiazan'ny governemanta amin'ny fitantanana ny krizy.
Nilaza i Inertia fa ny fandrosoana ara-toekarena haingana ao Shina no tena mahatonga ny fahalotoan'ny tontolo iainana nefa tsy misy ny olona miraharaha izany. Nanafaingana io dingana io ny Liberalisma sy ny OMC.
Nitsikera ny dosie telo samihafa sy misafotofoto izay navoaka momba ny fampiatoana ny famatsian-drano i Tango, izay nahatonga ny sahotaka tamin'ny ankapobeny teo amin'ny mponina. Tsy mbola fantatr'izy ireo fotsiny ny zavatra nambaran'ny governemanta momba izany. Rehefa nirohotra nitady rano ny rehetra, dia hoy fotsiny ny gazety ofisialy sy ny fahitalavitra hoe “milamina ny tanàna ary mitony ny vahoaka”
Nanadihady ny fitantaran'ny fampitam-baovao Shinoa izay nametraka ny fifantohana voalohany amin'ny fangaraharan'ny governemanta i Fanjun. Nihevitra izy fa maro tamin'ireo tantara nosoratana no tsy mitsinjo lavitra. Nangataka ny CNPC izy , izay tompon'ny orinasa mpamokatra akora simika, mba handray andraikitra amin'ny fanonerana sy ny fitsaboana taorian'io.
Hatramin'ny andro nanoratana ny lahatsoratra dia efa niverina tamin'ny ampahany ny famatsian-drano. Mbola voafetra ny sasany tamin'ireo orinasa mampiasa rano.
Vakio bebe kokoa :
Fikarohana Technorati ho an'i “Harbin”
Bingfeng: Manazava ny antony nahatonga an'i Harbin nandainga momba ny fandotoan-drano ny governora
T-Salon: Ny fomba nitantanan'ny sampan-draharahan'ny Governemanta ny fiparitahan'ny akora simika tao Harbin
NYT: Mampiseho ny loza ateraky ny fandotoana ao Shina ny krizin'ny rano
Guardian: Navela tao anaty hatsiaka ny mahantra tao Harbin raha maina ny tanàndehibe
Washington Post: Niezaka nanafina ny fiparitahan'ny akora simika ireo manampahefana Shinoa
Financial Times: Nikasa ny hamerina ny fifampatokisana ny manampahefana tao Harbin
Sary nalain'ny mponina iray tao amin'ny BBS
Sary tao amin'ny Flickr